Vaovao - Mampihemotra ny hazakazaka mahomby ny angovo
Masinina mialoha ny fiparitahana
Milina famolavolana endrika
Milina famolavolana mandeha ho azy feno
Masinina fanodinana semi-mandeha ho azy
Masinina fanapahana tontonana
Masinina famafazana pu
Vokatra vita amin'ny sombin-javatra
Box misy sombin-javatra
Vokatra vita amin'ny EPP
Vakana volo EPS
EPS sombin-tsakafo fitsapana rà
EPS boaty fanosotra gilasy
Fanampian-danja amin'ny lanjany
Ny pandemioma dia mampisasatra ny hazakazaka mahomby amin'ny angovo
Ny fahombiazan'ny angovo dia antenaina handrindra amin'ity taona ity ny fivoarany malemy indrindra ao anatin'ny folo taona, ka miteraka fanamby fanampiny ho an'izao tontolo izao hahatratra ny tanjon'ny toetrandro iraisam-pirenena, hoy ny International Energy Agency (IEA) tamin'ny tatitra vaovao ny Alakamisy.
Ny fampiasam-bola sy ny krizy ara-toekarena dia nampijanona ny fivoaran'ny angovo amin'ity taona ity, hatramin'ny antsasaky ny tahan'ny fanatsarana hita tao anatin'ny roa taona lasa izay, hoy ny IEA tao amin'ny tatitra momba ny Energy Efficiency 2020.
Ny tanjaky ny angovo voalohany manerantany, famantarana iray lehibe amin'ny fahombiazan'ny asa ara-toekarena manerantany dia antenaina hanatsara latsaky ny 1 isan-jato amin'ny taona 2020, ny taha ambany indrindra hatramin'ny 2010, araka ny tatitra. Io salan'isa io dia ambanin'ny iray ilaina mba hamahana ny fiovan'ny toetr'andro sy hampihenana ny fandotoana ny rivotra, hoy ny IEA.
Araka ny vinavinan'ny masoivoho, ny fahombiazan'ny angovo dia antenaina handefa maherin'ny 40 isanjaton'ny fihenan'ny famoahana entona entona mikraoba mifandraika amin'ny angovo mandritra ny 20 taona ho avy ao amin'ny Scenario fampandrosoana maharitra an'ny IEA.
Ny fampiasam-bola ambany amin'ny trano misy angovo ary vitsy ny varotra fiara vaovao eo afovoan'ny krizy ara-toekarena dia vao mainka mampitombo ny fivoarana miadana amin'ny fahombiazan'ny angovo amin'ity taona ity, hoy ny masoivoho monina any Paris.
Maneran-tany, ny fampiasam-bola amin'ny fahombiazan'ny angovo dia eo an-dàlana hihena 9 isan-jato amin'ity taona ity.
Ny telo taona ho avy dia ny fotoan-tsarotra izay ahafahan'izao tontolo izao manova ny fironana amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny angovo, hoy ny IEA.
"Ho an'ireo governemanta izay matotra amin'ny fampitomboana ny fahombiazan'ny angovo, ny fitsapana litma dia ny habetsaky ny vola natokana ho azy ireo tao anaty fonosana fanarenana ara-toekarena, izay ahafahan'ny fepetra mahomby manampy amin'ny fitomboan'ny harinkarena sy ny famoronana asa," Fatih Birol, the Executive Director of ny IEA, hoy ny fanambarana nataony.
“Ny fahombiazan'ny angovo dia tokony ho lohalaharana amin'ireo lisitra tokony hatao ho an'ny governemanta mitady fanarenana maharitra - milina fanaovana asa izany, mandeha ny hetsika ara-toekarena, mamonjy vola ny mpanjifa, manamboatra fotodrafitrasa tena ilaina ary mampihena ny entona. Tsy misy fialan-tsiny raha tsy mametraka loharano lavitra ao ambadik'izany, ”hoy i Birol nanampy.
Fotoana fandefasana: Dec-09-2020
Faritra avaratra, faritra indostrialy Nanlv, Tanànan'i Xinji, Sina